Tag: caymis | Martech Zone
OneLocal: Suugaanta Qalabka Suuqgeynta ee Ganacsiyada Maxalliga ah
Khamiista, Oktoobar 12, 2017 Jimco, Oktoobar 13, 2017 Douglas Karr
OneLocal waa nooc ka mid ah aaladaha suuqgeynta ee loogu talagalay ganacsiyada maxalliga ah si loo helo macaamiil badan oo socod-socod ah, gudbin, iyo - ugu dambeyntiina - kobcinta dakhliga. Barxadku wuxuu diiradda saarayaa nooc kasta oo ka mid ah shirkadda adeegga gobolka, oo ku fidsan baabuurta, caafimaadka, fayo-qabka, adeegyada guryaha, caymiska, guryaha, saloon, spa, ama warshadaha tafaariiqda. OneLocal waxay bixisaa meel lagu soo jiito, lagu xafido, laguna dhiirrigeliyo meheraddaada yaryar, iyada oo leh qalab loogu talagalay qayb kasta oo ka mid ah safarka macaamiisha. Qalabka dariiqa ku saleysan ee OneLocal ayaa caawiya
Khamiis, Juun 11, 2015 Khamiista, Oktoobar 29, 2020 Douglas Karr
Ma aragtay bartayada cusub ee la bilaabay? Runtii waa wax layaableh. Waxaan ka shaqeynay nashqadaha iyo horumarinta daabacaadayada mudo ka badan 6 bilood mana kuu sheegi karo inta aan qaadanay. Arrintu waxay ahayd mid fudud inaannaan horumarin karin si dhakhso leh oo dhammaystiran oo ku filan. Aragtidayda, qofkasta oo dhisaya mawduuc maanta laga soo bilaabo xoqdo wuxuu wax u dhimayaa ganacsiga ay la shaqeynayaan. Waan awooday inaan baxo